डलर टिप्ने यात्रा -भाग ७
कसैले त्यहाको अध्यागमनमा मेरो बिरुद्ध उजुरी हाली दिएछ । अरु बाहिर बसेका रहेछन ४ जना भित्र पसेर सोधे शेखर भनेको को हो ?। मैले परिचय दिएँ, एकले परिचय पत्र देखाउदै भने तिमी यहाँ गैह्र कानुनी रुपमा काम गर्दैछौ भन्ने खबर पाएर हामी आएको। त्यो सून्ने बित्तिकै म त जमिन मुनी पुगी हाले आँखा बाट तरर आसु झर्‍यो, बोल्ने साहस् पनि आएन। ति अधिकृत निक्कै भलाद्मी रहेछन, उन्ले मलाई नियाली मात्र रहे, केही समय पछी वाक्य फुट्यो । हो होइन थाहा छैन तर आत्माले भन्दा दिमागले छिटो जवाफ दियो ' यो सब मेरो हो । कम्पनी को नाम मात्र कसैको नाममा छ । पी.आर को लोभमा यो सबै भएको हो र प्रमाणको लागि म सित कागज पत्र छ। मलाई नेपाल पठाएर उ यो ब्यापार हडप्न चाहन्छ त्यसैले उस्ले झूठो उजुरी हालेको हो। 'यती भनी नसक्दै फेरी मेरा गला रोकिए आँखा को नुनिलो पानी मुख मा झर्‍यो । उस्ले कम्मर मा बाधेको हथकडी देखेर मा झन नर्भस भए । यत्तिकैमा ति अधिकृतको हात मेरो कुममा आयो म त झन झस्केँ, तर उस्को आँखामा दया भाब देखेँ । उस्ले के कागज् छ देखाउ भन्यो । कारमै सबै कागज थियो उन्लाई दिएँ । बैंक को करोबार , अध्यागमन को प्रोसेस कागज लगायत सबै अध्ययन गरे पछी उन्ले अन्य कामदर लाई सोधे उनिहरु ले पनि वास्तविक मालिक शेखर नै हो कागजी मालिक त आज सम्म देखेको चिनेको छैन भनी दिए, त्यसपछी ति अधिकारिले भने “कानुनमा त हामीले तिमी लाई छोड्न मिल्दैन' तिम्रो कुरो लाई विश्वाश गरेर म आफ्नो जिम्मेवारि मा छोड्दै छु, तर अब देखी तिमी यहाँ देखिनु हुन्न कसैलाई जिम्मा देउ वा जबसम्म तिम्रो कागज आउँदैन बन्द गर, फेरी देखे भने म सित पक्रनु को बिकल्प छैन ।”
उस्को शब्दले मलाई झन भाब बिह्वल बनायो। आशु रोकिएको थिएन कसैको दयाको पात्र बन्नु परेकोमा म बिक्षिप्त मात्र भईँन, एकातिर एउटा अधिकार प्राप्त बिदेशीले आफ्नो देश को कानुन बिपरित अपरिचित लाई दया गरी माफ गर्नु, अर्को तिर आफ्नै नेपाली जस्ले मेरो परिश्रम, दु:ख र लगानी देख्दा देख्दै बिना कारण नै नोक्सानी पुर्‍याउनु। यो दुई फरक मानसिकता म बाचुन्जेल बिर्सिन सक्दिन । यो घटनाले एउटा अनुपम अनुभब के पनि भयो भने धर्म, संस्कृती, भाषाले मानब बिचमा कस्तो भावनात्मक सामिप्य लेराउँदो रहेछ । उनी थिए फिजियन । नेपाल फर्कने बेलामा खोज्दै भेट्न गएको थिए धन्यबाद दिन तर उन्ले भेट दिएनन किनकी त्यस्तो भेट कानुन बिपरित हुन्छ त्यो देशमा । एउटा अपरिचित बिदेशीले मलाई एक मिनेटमा चिन्यो मेरो दर्द बुझ्यो अनी निस्वार्थ मानबियताको भावनाले प्रचलित कानुन समेत तोडिदियो, उ मानब थियो वा उस्को भेष मा भगवान ? म सधैं सोच्ने गर्दछु ।
उनीहरु फर्केपछी भएका ग्राहक अनी काम गर्नेलाई सरि भन्दै पठाइ दिएँ। रेस्टुराको ढोका बन्द गरी कारमा गै लामो सुस्केरा हाले। आँखा चिम्लेर मेरा बिगत लाई सम्झदै आफुले आँफै लाई सोध्न थाले मैले कहिले के पाप गरेको थिए र यो अनाहकमा सजाय भोग्नु पर्दैछ ? दिमाग लाई रिप्ले गरेँ, मैले कसैलाई ठगेको ढाटेको धोखा दिएको पनि छैन । आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेको पैसाले ब्यापार गरेको छु, ४-५ नेपाली लाई रोजगारी पनि दिएको छु किन जलन भयो कस्लाई ?, अब के गर्ने कसो गर्ने ?, मनमा हजार कुरा खेल्न थाल्यो । त्यो बिदेशी र मेरा नेपाली सम्झेँ । दुई बिचको मानसिक भिन्नता लाई दाँजे अली मन शान्त भए पछी रेस्टुरांको थन्को मन्को लगाइ घरतिर लागेँ न खान मन लाग्यो, न सुत्न सकेँ। घर वा अरु कसैलाई फोन गरेर कुरा गर्न पनि मन लागेन किन कस्ले ? उजुर गर्‍यो भन्ने प्रश्न मात्र मनमा आयो ।
कुन बेला आँखा लाग्यो थाहा नै भएन उज्याल्यो भैसकेछ । सिधै वकिलकोमा सल्लाह गर्न गएँ, उन्ले तत्काल अध्यागमनमा फोन गरेर पत्ता लाग्यो कि अझै दुई महिना लाग्न सक्तछ रे । कागजी मालिक लाई अघिल्लो दिनको घटना सुनाएँ, उन्ले हलुका रुपले लिए अनी सोधे अब के गर्छस ? । म कुनै कानुनी झन्झटमा पर्न चाहन्न, अर्को मान्छे खोज वा वकिल, घर भाडा , कती के तिर्न बाँकी छ तिरेर बन्द गर । नत्र म आँफै अध्यागमनमा गएर मैले कुनै जिम्मेवारि लिन नसक्ने भनी लेखेर दिन्छु । मेरा वकिलले पनि सम्झाए उन्लाई कि अन्तिम अवस्थामा यसरी धोखा दिनु हुन्न, कुनै समस्या परे म छु । तर उनी मानेनन । हे भगवान! अब के गर्ने ? , कता को साँढे सात को चक्रब्युह मा फसेँ म ? । बोरा का बोरा डलर टिप्न आएको त यो के हुँदैछ ? ,उन्को जवाफ पछी फेरी वकिल सित कुरा गरे के गर्ने भनेर । दर्ता कागज पत्र, जिम्मेवारिको नामसारी त गर्न मिल्दछ तर कस्ले लिन्छ ? । त्यत्तिकैमा अगिल्लो दिनमा रेस्टुरामा काममा रहेकी ( पूर्व नेपाल घर भएकी )बहिनीको फोन आयो, के हुँदै छ भनेर सोधिन मैले बेली बिस्तार् लगाए पछी उन्ले भनिन मेरो एक जना फलानो नाम गरेको दयालु र सहयोगि अंकल हूनुहुन्छ म वहाँ सित तपाईं को कुरा राख्दछु शायद सहयोग गर्नु हुन्छ कि । म सित त के जवाफ थियो र ? हुन्छ भनी दिए । वकिलले सल्लाह दिए कि कतै काम गर म खोजी दिन्छु तर गोर्खाली को छोरो न हो मर्न परे पनि झुक्न जान्दैन भने जस्तो त्यही ठाउँ मा कसरी काम गर्नु ? हिङ नभए पनि हिङ बाधेँको टालो छ रे क्या । कुनै उपाय भयो ठिकै भो, नत्र म नेपाल फर्कन्छु भनी वकिल लाई जवाफ दिए ।
ति बहिनीको फेरी फोन आयो उन्को अंकल ले पर्सी अर्थात तीन दिन पछी भेट्ने भनेका छन रे । तर म किन हो आसाबादी भने हुन सकिन । किनकी चिनेको आफन्तले त यो हालत बनाए भने चिन्दै नचिने को मानिस झन के रिस्क लीइदेलान । ब्यापार हरितन्नम भैसकेको थियो । त्यस लाई थप सेफ , काम गर्ने मान्छे राखेर लामो समय धान्न सक्ने अवस्था पनि नभएको ले फर्कनु मा नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने म पुगेको थिए ।.... बाँकी अर्को भाग मा.... ।
अन्य भाग पढ्न तलको लिंक थिच्नुहोला
भाग - ६
भाग - ५
भाग - ४
भाग - ३
भाग - २
भाग - १
Posted by: Dautari Admin Labels: अनुभव / अनुभूति
शेखर जि को यो डलर टिप्ने यात्राले चाँही मलाई मोहनी नै लगाएको छ तर डलर टिप्नको लागि भने होइन नि । जती पढ्यो त्यती त्यसपछि के भयो होला भन्ने कौतुहलता बढेर अचम्मै हुन्छ ।
अँ यो भाग ७ अलि ढिला आयो नि आशा छ अर्को भाग भने छिट्टै पढ्न पाइने छ । निरन्तरता र तपाईंको प्रगतिको कामना!
शेखरजी को डलर टिप्ने यात्रा कहिले हसाउने कहिले रुवाउने खालको छ। कथानै एउटा फिलीम जस्तो। मैले त भाट १ बाट पून पढ्ने सोच बनाएको छु।
भाग ७ को खुट्टा तान्ने प्रबिर्तीलाइ छर्लंगाएको छ। काम गरेर खाने मान्छेलाइ पनि सुखले काम गर्न दिदैनन यांहा। त्यो पनि अरु कोही नभएर आफ्नै नेपाली हुन्छन।
शेखरजी, तपाईको यो यात्रा त जत्ती पढ्यो उत्ती चाखलाग्दो हुँदै गै रहेको छ । माथि नेपालियनजीले भ्नु भए जस्तै कहिले हसाउँने कहिले रुवाउने । तर साच्चै बेजोड छ तपाईको यात्रा र यात्राको विबरण, अर्को भाग छिट्टै राख्‍नुहोला है !
Are you kidding? A friend of your went against you because you did something good.
He must be devil then.
It isanice story though.
निकै राम्रो लेख्नु भएको छ शेखर जी। तपाइ पनि लेख्नमा ओस्ताद, कमेन्ट गर्ने पनि ओस्तादनै हुदारहेछन दौतरीमा।
आफुलाइ त उही पढ्न मात्र आउंछ।
निर्मल बस्याल said...
कस्तो दुख परेछ शेखरजी तपाइलाइ। तपाइको दुख र यो कथाले मन छोयो।
मलाइ पनि परेछ यस्तो। मेरै कथा जस्तो लाग्यो।